CPJ oo ku baaqay in la fasaxo Radio Risaala lana sii daayo wariyaashiisa – Mareeg.com somalia, World News and Opinion.
6th January 2015 A warsame Af Soomaali, Featured 0
Mareeg.com: Gudiga difaaca Saxafiyiinta CJP ayaa ka hadlay xariga Agaasimaha idaacadda Risaala, Maxamed Cabdiwahaab Cabdulaahi Tafaftiraha Idaacadda Risaala Maxamedkaafi Sheekh Abuukar iyo wariye Maxamed Cabdi Cali.
Hey’ada CPJ ayaa warbixinta ay soo saartay kaga dalbatay Dowlada Soomaaliya ineey sii deyso Wariyaasha Idaacadda Risaala oo xabsi Nabad sugida leedahay ku xiran Maalintii 4-aad.
Wakiilka Bariga Afria ee CPJ Tom Rhodes ayaa Dowlada Soomaaliya ugu baaqay ineey xoriyadooda siiso wariyaasha u xiran, waxa uuna ka digay in Dowlada Soomaaliya ay caburiso Saxafiyiinta ka howlgala Dalka kuwaasi oo ku shaqeeyo xaalad adag.
Cabdiraxmaan Cismaan Cumar Yariisoow oo dowlada u hadlay ayaa CPJ u sheegay in sii haya wasiirka Warfaafinta, Mustaf Sheekh Cali Dhuxulow uu Laamaha amaanka kala hadlay xariga wariyaasha isla markaana uu ka dalbaday in la siidaayo wariyaasha Risaala ee u xiran Dowlada.
3-dii bishaan December ayaa ciidamada dowladda Soomaaliya xireen Radio Risaal iyo 3 ka mid ah maamulka iyo shaqaalaha Idaacadaas, ka dib markii idaacada ay baahisay war la xariiro Cudurka EBOLA.
10 qof oo Soomaali u badan oo maxkamad lagu soo taagay Uganda